Hitch na ahia | Martech Zone
Hitch na ahia
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ohere iji lee ihe nkiri ahụ Ekeghari. Ihe nkiri ahụ dị afọ ole na ole, mana ọ bụ ihe atụ dị egwu maka ịzụ ahịa. Na ihe nkiri ahụ, Alex Hitchens (Will Smith), na-akụziri ụmụ okorobịa na-enweghị ohere ịchọta nwa agbọghọ nke nrọ ha. Ndụmọdụ ọ na-enye bụ ka ị gbalịa ibelata mmejọ ọ na-enwu enwu, toaa ntị na ụbọchị gị, wee rụọ ọrụ ụlọ.
Ọnọdụ a na-agaghị echefu echefu bụ ebe a na-agba ọsọ ọsọ ebe esemokwu na-aga. Sara (Eva Mendes) na-akparị ya na Hitch kwadoro ụbọchị ha, na-egwu ala maka ihe nketa ya na nke ezinụlọ ya iji mee ka ụbọchị ahụ bụrụ ihe echefu echefu. Ọ na-akparị na a na-achịkwa ya, Ọ tụrụ Hitch n'anya n'ihi na ọ na-anwa ime ihe ga-emeri ya.
Isi ihe nkiri ahụ bụ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụghị ịnye ọzụzọ, mgbanwe ndị ahụ, atụmatụ, na ihe ndị ọzọ kpasuru Sera iwe, ọ bụ n'echiche na Hitch enweghị ezi obi, ọ chọghị mmekọrịta, ọ nwere ike bụrụ na ọ na-achọ itinye ọkwa ọzọ. ihe ndina ya.
Ire ahia bu ime ihe omume ulo gi ka i ghota onye ahia gi ma obu olile anya gi, wee wulite mmeko na ezi obi na ntukwasi obi. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ngwaahịa na ọrụ dị oke egwu, mana anyị enweghị ike 'ịdọrọ' ndị mmadụ iji nwaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahụ. Ọ bụrụ na ha nyere anyị ohere, anyị maara na anyị nwere ike ịgbanwe ha ka ọ bụrụ onye ahịa hụrụ anyị n'anya.
Ikekwe, e nwere ihe ụfọdụ na-emegide eziokwu ahụ bụ na Internet nwere ọtụtụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ọtụtụ ndị ọkachamara n'ahịa. Otutu n’ime anyi choro enyemaka na ahia anyi (ma nweta nwata nwanyi!).
Tags: datannweta dataikedomarketingatụmatụga-smith
Mee 26, 2007 na 6: 04 PM
Doug, ahụla m ihe nkiri ahụ ugboro abụọ ma etinyere m ya na ndụ onwe m na nke ọkachamara. Ọ nwetara m nwoke ahụ m na-ekwukarị na achọrọ m yana ọrụ dị egwu nke enweghị ike ịkụ ya. N'ụzọ ụfọdụ ọ bụ naanị ihe nkiri, ma ọ bụrụ na ị na-ekiri ya n'ezie, ọ dị ka nkà ihe ọmụma maka ndụ. Ndụmọdụ ahụ na-arụ ọrụ maka ịnweta nwoke ahụ / nwa agbọghọ, ịkwaga na ụlọ ọrụ na ịmepụta azụmahịa ọhụrụ ma ọ bụ ọbụna ịnweta ụlọ mbụ gị. Maka ọnọdụ ndị ahụ niile ịchọrọ ịbụ nke kacha mma, mee ihe omume ụlọ akwụkwọ gị ma gee ntị n'ezie n'ihe na-eme.
Mee 28, 2007 na 12: 16 PM
Duane, nke ahụ dị egwu! Obi dị m ụtọ na ọ bụghị naanị m nwere mmasị na ozi dị n'okpuru.
Mee 28, 2007 na 11: 36 AM
Ekwenyere m. Eji m ndị ahịa m rụọ ụlọ ọrụ brik na ngwa agha abụọ na TRUST. N'otu n'ime azụmahịa m, anyị enwewo ike ịmata ọdịiche dị n'etiti onwe anyị n'ọma ahịa site n'ịgwa ndị ahịa na-arụzi kọmputa anyị eziokwu! Ọ bụ ụbọchị mwute mgbe ị bụ otu n'ime ndị ikpeazụ na-akwụwa aka ọtọ na kọmputa rụkwaa azụmahịa gburugburu!
Mee 28, 2007 na 12: 19 PM
Anọ m na azụmaahịa ngwaike maka igbutu anya n'ihi na enweghị m ike ịsọ mpi. Enwere m ike iwulite otu heck nke sistemu mana enwere m igwe eji eme ihe na-eri 1/3 nke ọnụ ahịa ya. Eleghị anya m gaara anọrịrị na azụmaahịa mana ike gwụ m ịkọwa na ị na-akwụ ụgwọ maka ịdị mma - ọbụlagodi na kọmputa niile na-abịa na igbe rọba na ọla.
Ị bụ eziokwu na otu ihe… e nwere nnọọ ole na ole kọmputa rụkwaa ulo oru nwere ike idi nrụgide nke mpi. Ọ bụ ihe akaebe nye ụlọ ọrụ gị! Ekele.